विमानस्थलमा दुब्र्यवहार गर्नेहरुको नियत मैले बुझिहाले : मन्त्री भट्टराई — Chetana Online
विमानस्थलमा दुब्र्यवहार गर्नेहरुको नियत मैले बुझिहाले : मन्त्री भट्टराई
काठमाडौं, २८ भदौ । नेपालगञ्ज विमानस्थलमा आफुलाई भ्रष्टाचार बिरोधी अभियन्ता दावी गर्ने राजावादी ज्ञानेन्द्र शाही लगायत उनका कार्यकर्ताले दुब्र्यवहार गरेपछि पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रतिकृया दिएका छन् ।
उनी नेपालगन्ज विमानस्थलवाट काठमाडौं फर्कने क्रममा विमानस्थलमै रहेका शाही लगायतका केही ब्यक्तिले जहाज ढिलो भएको भन्दै मन्त्री भट्टराईलाई दुब्र्यवहार गरेका थिए । दुब्यवहार सहेका मन्त्री भट्टराई केही नबोली बसीरहेका थिए । काठमाडौं पुगेपछि सामाजिक सञ्जाल मार्फत मन्त्री भट्टराईले आफुलाई राजावादीहरुले अभद्र ब्यवहार गरेको संकेत गरेका छन् ।
एकजनाले पारसका बिरुद्ध सातलाख हस्ताक्षर दरबारमा बुझाएर तैले हामीलाई कति दुस्ख दिएको छस् ? त्यो हामीले कहाँ बिर्सेंका छौ र ? भन्दै आक्रामक ढँगले प्रस्तुत भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसवुक मार्फत प्रतिकृया दिएका छन् ।
मन्त्री भट्टराईले आफु भोली आइतवार प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने भएकाले काठमाडौं आउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकाले जहाजलाई अनुरोध गरेर १५ मिनेट ढिलो विमानस्थल पुगेको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा ढिलो भएका कारण धनगढी बिमानस्थलवाट फर्कने पूर्वनिर्धारित तालिका रद्ध गरि नेपालगन्जको उडानलाई अनुरोध गरेर नेपालगन्ज पुगेको बताएका छन् । उनले अन्य यात्रु भन्दा आफु १५ मिनेट विमानस्थलमा ढिलो पुगेको भन्दै आफ्ना कारण अन्य यात्रुलाई परेको असुविधा प्रति माफि समेत मागेका छन् । यस्तो छ मन्त्री भट्टराईले लेखेको स्टाटस
‘आज कैलाली जिल्लाको टिकापुरमा आयोजना भएको डलफीन महोत्सबको कार्यक्रम सकेर बुद्ध एयरको धनगढीको अन्तिम उडानबाट काठमान्डौ फर्कने मेरो योजना रहेको थियो । तर कार्यक्रम ढिला भएको कारण बुद्ध एयरसँग अनुरोध गरेर नेपालगंजको अन्तिम उडानबाट काठमान्डौ फर्कनेक्रममा केहि ढिला हुन गएको सत्य हो ।
सबै यात्रुको बोर्डिङ भएको करिब १५ मिनेटमा हाम्रो टिमको बोर्डिङ भएको हो । भोली प्रतिनिधिसभामा माननीयहरुको प्रश्नको मैले जबाफ दिने कार्यक्रम रहेको कारण काठमान्डौ फर्कनै पर्ने दबाबमा म थिए । नेपालगंज बिमानस्थलमा ३-४ जना ब्यक्तीहरु आ क्रमक शैलीमा मेरा बिरुद्ध प्रस्तुत हुनुभयो ।
एकजनाले पारसका बिरुद्ध सातलाख हस्ताक्षर दरबारमा बुझाएर तैले हामीलाई कति दुस्ख दिएको छस् ? त्यो हामीले कहाँ बिर्सेंका छौ र ? सम्म भने । त्यो सुने पछि उनीहरुको नियत मैले बुझिहाले । सम्पूर्ण यात्रु तथा बुद्ध एयरले देखाएको समझदारीप्रति धन्यवाद ब्यक्त गर्दछु । मेरा कारणले यात्रुहरुमा पर्न गएको असुबिधाप्रति भने क्षमाप्राथी छु ।’
प्रकाशित मिति: September 15, 2019